Santa Maria del Naranco | Vaovao momba ny dia
Raha tianao ny zavakanto sy ny asa tanana, azo antoka fa efa nandre ny momba ny Pre-Romanesque ao amin'ny Saikinosy ianao. Ao an-tanànan'i Oviedo, eny ivelan'ny morontsiraka, dia mahita solontena maromaro amin'ity fironana ity isika, ny lehibe indrindra dia ny fiangonana Santa María del Naranco. Ity fiangonana ity dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany tsara indrindra ao Oviedo, satria mahita trano manan-tantara manan-danja tokoa isika.
Tokony holazaina fa samy Santa María del Naranco as San Miguel de Lillo ary i Santa Cristina de Lena dia misolo tena an'i Eropa antonony antonony ary izy ireo no trano manandanja indrindra tamin'izany fotoana izany. Androany isika dia hahita ny antsipiriany momba an'i Santa María del Naranco, natsangana nandritra ny fanjakan'i Ramiro I.
1 Tantaran'i Santa María del Naranco
3 Haingo ny Santa María del Naranco
4 Fampahalalana mahasoa an'i Santa María del Naranco
Tantaran'i Santa María del Naranco
I Santa María del Naranco dia tranobe iray izay teo anelanelan'ny tranoben'ny lapa izay nisy an'i San Miguel de Lillo ihany koa. Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana, ity toerana ity dia nantsoina hoe fiangonana, na dia tsy mazava aza ny tanjony, efitrano fianarana mpanjaka, lapa na tranom-pinoana. Niova toe-javatra ity Aula Regia ity rehefa nianjera ny faritra sasany tao San Miguel, hany ka androany Santa María del Naranco Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe fiangonana alohan'ny Romanesque.
Ny kompana iray manontolo dia natsangana nandritra ny valo taona nanjakan'i Ramiro I. Ity fiangonana ity dia niova fanovana isan-karazany nandritra ny vanim-potoana Gothic sy Baroque. Amin'ny taona 1885 dia nanambara ho tsangambaton'ny firenena ary tamin'ny 1929 dia naverina tamin'ny laoniny izany. Tamin'ny taona 1985 dia nambaran'ny UNESCO ihany koa ho vakoka manerantany amin'ny faritra misy ireo fiangonana ao amin'ny fanjakan'ny Asturias.
Ity lapa ity ho an'ny fialamboly dia manana vitsivitsy roa-polo metatra ny lavany ary enina ny sakany. Misy rihana roa misy fizarana mazava izay ampiarahin'ny tohatra ivelany koa. Avy any ivelany dia azonao atao ny mahita trano iray toa vonoina, misy rihana roa sy tampon-trano. Amin'ny lafiny lava dia hitantsika ny varavarana misy tohany boribory semicircular izay manolotra ny fidirana amin'ny trano. Amin'ny faritra avaratra dia misy tohatra manome fidirana amin'ny faritra ambony.
ny ny tarehy amin'ny faran'ny dia mahavariana noho ny hatsaran-tarehiny, izay ahafahanao mankasitraka ny maha-zava-dehibe ny fizarana. Misongadina ireo lavarangana misy tohany boribory boribory telo eo amin'ny rindrina, satria io no iray amin'ireo antsipiriany lehibe indrindra. Ny andohalambo afovoany dia lehibe kokoa noho ny roa hafa. Ireo andohalambo ireo dia mitondra hazavana be any amin'ny faritra ambony amin'ny fiangonana. Ao amin'ny faritra ambony dia azonao atao koa ny mahita varavarankely misy andohalambo telo izay manome symmetrika sy toetra maha-izy azy manontolo.
Avy ao anaty no azonao atao tsidiho ny faritra ambany ary mianika amin'ilay ambony amin'ilay tohatra. Ny rihana ambony no nisy ny manan-kaja, nisy efitrano afovoany misy andohalambo voaravaka arche enina notohanan'ny corbels. Misokatra mankany ivelany ity faritra ity mankany amin'ireo lavarangana voalaza etsy ambony. Ilay zavamaniry hafa dia manana fizarana mitovy amin'izany saingy amin'ny ambaratonga kely kokoa.
Tokony holazaina fa ny asa manontolo dia vita amin'ny ashlar, fitaovana mahazatra amin'ny zavakanto Asturian. Ao amin'ny sety ihany koa ny hafa tranobe misy serivisy kely, na dia nanjavona aza ny maro an'isa. Noho izany dia tsy ankasitrahana intsony fa samy San Miguel de Lillo sy Santa María del Naranco dia ao anatin'ny vondrona iray ihany. Na izany aza, voatahiry ao anaty toetry ny fiarovana tsara izy ireo.
Haingo ny Santa María del Naranco
Na dia toa mahasosotra aza ity trano ity raha vao jerena, toy ny Romanesque sy Pre-Romanesque, ny marina dia misy singa haingon-trano ihany koa. Tena mahazatra ny mahita ny haingo amin'ny tady, izany hoe manahaka tady manaingo ny faritra sasany toy ny renivohitra. Ao amin'ny kapitalin'ny tsanganana dia azonao jerena foana ny antony voajanahary, miaraka amin'ny zavamaniry sy biby.
Fampahalalana mahasoa an'i Santa María del Naranco
Izahay dia miatrika ny iray amin'ireo asa lehibe indrindra tamin'ny vanim-potoana medieval sy talohan'ny Romanesque tany Asturias. Asa iray izay efa nianarana momba ny asa kanto. Mora ny mitsidika an'ity toerana ity hatramin'izay eo akaikin'ny Oviedo, eo amin'ny Tendrombohitra Naranco no misy azy. Efatra kilometatra monja avy eo amin'ny foibe manan-tantara no ahafahantsika mahita io asa lehibe io. Misy vidiny kely handoavana ny fidirana nefa tena mendrika izany. Raha eo afovoan-tanàna isika dia afaka mandeha mankany amin'ny gara raha tsy avy amin'ny arabe malaza Uría. Avy eto dia azo atao ny mitondra bus amin'ny zotra A izay mitondra antsika mankany amin'ity tendrombohitra ity izay ahafahantsika mitsidika an'i Santa María del Naranco. Raha te-handeha isika dia tsy maintsy dinihintsika fa misy fiakarana iray, na dia zatra mitsangatsangana aza isika dia mety ho drafitra tsara hitsidihana an'io tsangambato mahafinaritra io izay manolotra fahitana tsara momba ny tanàna ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Santa Maria del Naranco
Las Médulas, Lova Iraisam-pirenena